Iindaba ezi-3 kunye neziganeko ezingama-21 ezibalulekileyo kwimeko ye-GEO-Ukuqala ngo-2019
I-Bentley, iLeica kunye nePlexEarth zezinye zezinto ezinomdla kakhulu eziqala ngoFebruwari 2019. Ukongeza, sibonisa ukuba siqokelele iminyhadala engama-21 enomdla esendleleni, apho lonke uluntu lweengcali ze-geoengineering lunokuthatha inxaxheba. Ezinye zezihloko ekubhekiswe kuzo kwezi ziganeko zezi: BIM, GIS, PDI, Geostatistics, ...
Akubonakali ngathi, kodwa isibonelelo esenziwe yiPlexScape IiNkonzo zeWebhu ukuguqula ulungelelwaniso kwaye sibonise iimephu zikaGoogle yinto enomdla yokuqonda indlela ezisebenza ngayo iinkqubo zemimandla eyahlukeneyo yehlabathi. Ngenxa yoku, ilizwe likhethwe kwiphaneli ebonisa iiNkqubo zokuLungelelanisa emva koko ...
Kude kube ngoku bekuqhelekile ukubona i-UTM kunye nolungelelwaniso lwejografi kwiiMephu zikaGoogle. Kodwa uhlala ugcina i-datum exhaswa nguGoogle eyi-WGS84. Kodwa: Kuthekani ukuba sifuna ukubona kwiiMephu zikaGoogle, uququzelelo lweColombia kwiMAGNA-SIRGAS, WGS72 okanye kwiPSAD69? Ulungelelwaniso lweSpain kwi-ETRF89, Madrid 1870 okanye nakwiREGCAN 95? ...
Iiphotography, ezintsha, Ukuprinta kokuqala
Iposi phakathi kweenyanga ezingama-50
Emva kweenyanga ezingama-50 zokubhala, esi sisishwankathelo. Ekuboneni kokuqala, nangona ukhetho lusekwe kwimibono yephepha, i-radiografi yile: 13 inento yokwenza ne-AutoCAD okanye usetyenziso lwayo oluthe nkqo. Umxholo osisigxina, phakathi kweendaba zeenguqulelo ezintsha, usetyenziso olusebenzayo kunye noluntu ...
Okufumaneka, INDEX, egeomates My
I-Microstation, ukusuka kuguqulelo 8.9 (XM) izisa uthotho lwemisebenzi yokunxibelelana neGoogle Earth. Kule meko ndifuna ukubhekisa ekungeniseni imodeli enamacala amathathu kunye nomfanekiso wawo, into efana nale yenziwa yi-AutoCAD Civil 3D. Le misebenzi yenziwe ngokwenza: Izixhobo> zejografi okanye kwimeko yeMicrostation ...